ဆရာဝန်တစ်ဦးကဘာလဲ? ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက် | USAHello
ဆရာဝန်တစ်ဦးကဘာလဲ? အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဆရာဝန်ရှိပါတယ်? ဘယ်တဦးတည်းကိုသင်သွားသင့်? သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေး၏အရာမျိုးကိုလေ့လာပါ.
တစ်ဦးကဆရာဝန်နေမကောင်းလူတွေကိုဆက်ဆံဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. USA တွင်, ဆရာဝန်များကများစွာသောမျိုးစုံနှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားများရှိပါတယ်. အမေရိကန်တွေဆေးဘက်လုပ်သားများကိုခေါ် “ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ” သို့မဟုတ် “ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေး။” ဤရွေ့ကားသင်နေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါသင်ကူညီသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုများမှာ.
မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ (PCPs) အခြေခံများကို, နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေး. တစ်ဦးက PCP များသောအားဖြင့်သင်သည်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည့်အခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပထမဦးဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ PCP ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည် (ထို့အပြင်အမေရိကန်အတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုခေါ်), ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့လက်ထောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သူနာပြု Practitioner. သင့်မိသားစုအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များကတူညီသော PCP မြင်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ဒေသခံကျန်းမာရေးစင်တာမှာအခြေစိုက်ကလူအတော်များများမြင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျနှစျပေါငျးမြားစှာတူညီ PCP မြင်စေခြင်းငှါ.
သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူရှိလိမ့်မည်. အများစုမှာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးဌာနသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ. သငျသညျမိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်: “သငျသညျအကြံပြုနိုငျသောဆရာဝန်ကဘာလဲ?”. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးရုံးသို့မဟုတ်ဆရာလည်းသင်တစ်ဦးကမိသားစုဆရာဝန်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. သို့မဟုတ်သင်အတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် FindHello ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်.
သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံတားဆီးကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားပါ! ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသင်တို့ကိုရပ်တန့်ဖို့ကူညီသောအခြားအစီအစဉ်များဖြစ်ကြောင်း. သူတို့ကသင်နေမကောင်းမခံစားရဘူးသို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ဘာမှသတိထားမိကြပြီမဟုတ်လျှင်ပင်သင်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်စစ်ဆေးမှုများ-ups လာပြီပါဝင်သည်. ကနျြးမာရေးပြ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး (စမ်းသပ်မှုများ) အခမဲ့ရရှိနိုင်. အများဆုံးကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပြထွက်ရှာမည်.
သင့်ရဲ့အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့ဒဏ်ရာနှင့်နာမကျန်းများအတွက်အထူးကုရန်သင့်အားပေးပို့စေခြင်းငှါ. တစ်ဦးကအထူးကုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခန္ဓာကိုယ် system သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအပေါ်အလေးပေးသူတစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဖြစ်ပါသည်. ဥပမာ, တစ်အရေပြားအရေပြားဂရုစိုကျ, တစ်ဦး gastroenterologist အစာခြေစနစ်ကဂရုစိုကျ, ကာ orthopedist သွေ့ခြောက်သောအရိုးဂရုစိုကျ.
သငျသညျအစာအိမ်ပြဿနာများရှိသည်, နှင့်သင့် PCP စမ်းသပ်ဘို့သင့်ကိုပို့ပေး
တချို့ကအထူးကုရုံကလေးများသို့မဟုတ်အကွီးအကဲမြားစှာဆကျဆံ. မတူညီတဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဆရာဝန်တွေအမျိုးအစားများ သင် USA တွင်ဖြည့်ဆည်းမယ်.
တစ်ဦးကလွှဲပြောင်းသင်သည်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုမြင်ရကြောင်းထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါသည် (အထူးကု, ဥပမာအားဖြင့်). သင်တစ်ဦးအထူးကုတွေ့မြင်မတိုင်မီသင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းဘို့သင့် PCP မေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. အဆိုပါအထူးကုဒီလိုအပ်မယ်သို့မဟုတ်သင့်အာမခံကုမ္ပဏီတောင်းစေခြင်းငှါ,. သင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းအထူးကုနှင့်အတူရက်ချိန်းမချခင်လိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကကြည့်ရှုရန်သင့်ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သေချာပါစေ. သင်သည်သင်၏အာမခံခရီးစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်နြိုငျလမျး.
သင့်မိသားစုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကနှောင်းပိုင်းတွင်သောနေ့၌ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေကိုကျော်နေမကောင်းဖြစ်လာလျှင်အဘယ်အရာကို? သငျသညျချက်ချင်းပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ပြီးတစ်ဦးလေးနက်ပြဿနာရှိပါကကဘာလဲ? သင့်ရဲ့ PCP နှင့်အတူရက်ချိန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သမျှမဖြစ်စေခြင်းငှါ. သို့သော်ချက်ချင်းအကူအညီရရန်အခြားနေရာများတွင်ရှိပါတယ်:
အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လမ်းလျှောက်-in ကိုဆေးခန်းမကြာခဏညဦးနှင့်တနင်္ဂနွေနာရီရှိသည်နှင့်ရက်ချိန်းမရှိဘဲအသေးစားဆေးဝါးကုသမှုပြဿနာများအတွက်စောင့်ရှောက်မှုပေး. လိပ်စာများ၏မှတ်ချက်ကိုယူ, ပွင့်လင်းနာရီ, သငျတို့သကျရှငျနထေိုဘယ်မှာမှအနီးအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
တစ်ဦးကဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်ဌာနကိုအသက်အန္တရာယ်နှင့်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်. အများစုမှာအရေးပေါ်ဌာနများဖွင့် 24 နာရီတစ်ရက်, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်. သငျသညျတည်နေရာကိုသိတာသေချာပါစေနှင့်သင့်အိမ်နှင့်အနီးဆုံးအရေးပေါ်ဌာနသတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ယူအက်စ်အေကအရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုန်ဆောင်မှုများကောင်းတစ်ဦး system ကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာဆေးရုံများလူတွေကိုယူလေ့ကျင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်လူနာတင်တို့ကပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလည်းပါဝင်သည်. အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုမကြာခဏနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ရဲနှင့်မီးသတ်သမားဌာနများ. တခါတရံမှာသူတို့ကဆေးရုံများသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက run နေကြတယ်.